माछापालक कृषकलाई गाउँपालिकाको अनुदान – Hotpati Media
१७ आश्विन २०७७, शनिबार ०८:४३ मा प्रकाशित (3 हप्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
बनेपा- रोशी गाउँपालिका वडा नं. ९ का कुमार लामाले पिन्थलीवेँशीमा ठूलो दूई वटा पोखरी बनाएर माछा पाल्न थाल्नुभएको छ । करिब ८ लाखमा माछापालनको संरचना निर्माण पश्चात अहिले सो पोखरीमा माछाका भुरा हालेर हुर्काउने काममा उहाँ व्यस्त छन् ।
बजार क्षेत्र ठूलो भएको र त्यहाँ अरु त्यस्तो व्यवसाय नभएपछि माछापालन शुरु गरेको लामाले बताउनुभयो । सो व्यवसायमा दुईमहिनादेखि दुई जनाले रोजगारी पाएका छन् । उहाँहरुको काम माछालाई दाना दिने, पानीको कुलो बनाउने र चरा धपाउने हो । यसअघि बनेपामा निर्माण मजदूरी गर्ने विमला लामा माछा पालन शुरुपछि काम गर्दै आएको बताउनुहुन्छ ।
कुमार मात्रै होइन त्यसरी माछा पाल्नेमा सोही गाउँपालिका वडा नं. ७ का भीम लामा र वडा नं. ११ का बलराम आलेमगरले पनि व्यावसायिक माछापालन शुरु गर्नुभएको छ । रोशीमा अहिले पिन्थलीवेँशीमा रहेको पोखरीमा ४० हजार माछाका भुरा हालेर माछापालन शुरु गरिएको छ । संरचना निर्माणगरेसँगै पोखरीको क्षमताको आधारमा माछाको भुरा उपलब्ध गरिदिएको रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दलबहादुर लामाले बताउनुभयो । त्यस्तै वडा नं. ७ को चारसय फाँटमा ४० हजार र वडा नं. ११ मा १२ हजार माछाको भुरा उपलब्ध गराएको पालिका अध्यक्ष लामाले बताउनुभयो ।
कृषि तथा वन विज्ञान विविमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन